News Archives - Page 105 of 107 - United News Myanmar
ဘယ်လင်ဟမ်ကိုခေါ်ယူရေးမှာ မန်ယူနဲ့ ဒေါ့မွန် ဘယ်သူက အသာရနေပြီလဲ?
June 17, 2020 - by United News - LeaveaComment
ဘာမင်ဂမ်စီးတီး အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား ဂျုဒ့် ဘယ်လင်ဟမ် ကို ခေါ်ယူရေးအတွက် ယူနိုက်တဒ် နဲ့ ဒေါ့မွန် အသင်းတို့ယှဉ်ပြိုင်နေမှု့မှာ ဂျာမန်ကလပ်ဖက်က အသာရနေပြီလို့ SportBild အဆိုရသိရပါတယ်။ ဂျာမဏီကလာတဲ့သတင်းတွေအရတော့ အဂ်လန် သားဟာ သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားသမားဘဝ တိုးတက်ရေးကို မန်ချက်စတာမှာထက် ဂျာမန်မြေမှာ ပိုမိုမြှပ်နှံလိုပြီး အီလန်ဟာလန်း၊ဂျေဒန်ဆန်ချိူ၊သော်ဂန်ဟာဇဒ်၊ဘရန့်၊ဟာကီမီ တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကို ပုံတူကူးပြီး ပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာဖြစ်တယ်လိူ့ဆိုပါတယ်။ ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ …
ဆန်းချက်ဇ်ရဲ့အနာဂတ်ကို အရိပ်အမြွက်ပြောလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
June 17, 2020 June 17, 2020 - by United News - LeaveaComment
ယူနိုက်တဒ်နည်းပြဆိုးလ်ရှားကတော့ ချီလီသား အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် အတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်အာမခံချက်ကပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း အသင်းမှာတော့ နေရာတစ်နေရာစာရရှိနိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အင်တာမီလန်အသင်းကို ရာသီကုန်အထိ အငှားချထားပြီး လာမယ့်ရာသီအတွက် အဝယ်လက် ရှာဖွေနေတဲ့ ယူနိုက်တဒ် အတွက် ဆန်းချက်ဇ် ပြသနာ ဟာလည်း ကြီးမားတဲ့ဖိအားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကျောနံပတ် (၇) ကို ဆန်ချိုကိုပေးရမယ့်အပြင် ပေါဂ့်ဘာ နဲ့ ဆန်းချက်ဇ်ကြားမှာ မပြေလည်မှု့တွေ လည်းရှိတာကြောင့် ဆိုးလ်ရှား …
ဘယ်လင်ဂမ်ကိုခေါ်ယူရေးမှာ မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ဒေါ့မွန် ဘယ်သူအသာရနေပြီလဲ?
ဆုဖလားစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးမယ့် သရဲနီကစားသမားရဲ့အမည်ကို ဖီးလ်နဗီးလ်ဖွင့်ဟ
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အဓိကကွင်းလယ်လူပေါ့ဘာက နောက်ရာသီမှာ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ကို စိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အသင်းကို ကောင်းကောင်း အကူအညီပေးသွားမယ်လို့ ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ ဖီးလ်နဗီးက ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားကိုယ်တိုင်ကလည်း ပေါ့ဘာနဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်အတွဲအဖက်ကို အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်အတွဲအဖက်အဖြစ်မှတ်ယူထားပြီး ဆုဖလားစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးသွားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။ ဒီရာသီမှာ ကာလရှည်ဒဏ်ရာရနေခဲ့တဲ့ပေါ့ဘာဟာ ကြံ့ခိုင်မှု ပြည့်ဝလာပြီဖြစ်ပြီး ပြန်လည်စတင်မယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ပေါ့ဘာနဲ့ ဘရူနိုဖာနန်က်စ်အတွဲအဖက်ဟာ တခါမှ မကစားဖူးသေးတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေကလည်း …
အသင်းသားတဦးပြန်လာခြင်းဟာ ဆိုးလ်ရှားအတွက် ကစားသမားသစ်ခေါ်လိုက်သလိုပဲဆိုတဲ့ ရပ်နပ်
ကာလရှည်ကြာ ခါးဒဏ်ရာကနေ ပြန်လည်သက်သာလာပြီး အသင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် ကြောင့် ယူနိုက်တဒ် အနေနဲ့ ကစားသမားအသစ်တစ်ယောက် ထပ်ရလိုက်သလို အင်အားတောင့်တင်းသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ မားကပ်စ်ဒဏ်ရာရနေချိန်အတောအတွင်းမှာ ယူနိုက်တဒ်ရဲ့ရလာဒ်ပိုင်းက အကောင်းဖက်ကိုဦးတည်နိုင်ခဲ့သလို ယူနိုက်တဒ် အတွက် ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ မားကပ်စ်ပြန်လာတာ က အသင်းကိုများစွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်နပ်က ” အခုလက်ရှိမန်ချက်စတာယူနိုက်တဒ်အသင်းကိူ ကြည့်လိုက်ပါ။သူတို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်ပြီးခြေစွမ်းလည်းမြင့်မားတဲ့ မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့် က ကြံခိုင်မှု့အပြည့်အဝပြန်ရပြီး အသင်းကိုပြန်ပူးပေါင်းနိုင်နေပြီ။သူပြန်လာတာကယူနိုက်တဒ်အတွက် …
ရပ်ရ်ှဖိုဒ့်ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို အသိမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အစိုးရ
မန်ယူနိုက်တဒ် တိုက်စစ်မှုး မားကပ်စ်ရရ်ှဖိုဒ့်ရဲ့ ကလေးများအတွက် အခမဲ့အစားစာဝေငှရေးအစီစဉ်အတွက် အစိုးရထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင် ဦးဆောင်တဲ့ ဗြိတိန်အစိုးရ က လက်ခံခဲ့ပြီး ရရ်ှဖိုဒ့်တောင်းဆိုတဲ့ U-turn အစီစဉ် ကို ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒေါင်းနင်းလမ်းအခြေစိုက် ဗြိတိန်ပါလီမန် ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆင် အစိုးရ အနေနဲ့ ‌ကလေးများအတွက် အစားသောက် အခမဲ့ ထောက်ပံ့ရေးအစီစဉ်ရပ်နားထားမှု့ကို ပြန်လည်စတင်မှာ …
အပြောင်းအရွှေ့နှင့် နံနက်ခင်း ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ
အက်စတွန်ဗီလာအသင်းဟာ အပြောင်းအရွှေ့တွင် ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဂလေးလစ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြေးကို အနည်းဆုံး ပေါင် သန်း ၈၀ တောင်းဆိုသွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်က ၎င်းကို ခေါ်ယူဖို့ ထိပ်ဆုံးကရေးပမ်းစားနေပြီး ပစ်မှတ်စာရင်းမှာ ထိပ်ပိုင်းမှာရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ သောကြာနေ့ည(1) နာရီ (45) မိနစ်တွင်ကစားမည့် စပါး- ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်ကို ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် Jonathan Mossက ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်နည်းပြဆိုးလ်ရှားက နောက်ခံလူရိုဟိုကို လာမည့်ဘောလုံးရာသီတွင်အသင်းမှထွက်ခွာလိုလျှင် …
လူငယ်တွေကို ထပ်မံစင်တင်လိုက်ပြီး အလှည့်ကျစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ့် ဆိုးလ်ရှား
နည်းပြကြီးဆိုးလ်ရှားကတော့ လူငယ် အသင်းရဲ့ အလားလာရှိတဲ့ ကစားသမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ဂျိမစ်းဂါနာ၊အိန်ဂျယ်ဂိုးမတ်ဇ်၊တာဟစ်ချောင် တို့ကို စီနီယာ ကစားသမားတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အသင်းကြီးလူစာရင်းကို အင်အားဖြည့်တင်းလိုက်ပါတယ်။ အသင်းမှာ ဒဏ်ရာပြသနာ ကင်းစင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် လူအင်အား‌ပိုင်းအတောင့်တင်းဆုံးဖြစ်နေပေမယ့် ဆိုးလ်ရှားက နေရာလုတိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုပြီး ကစားသမားတိုင်းက ပွဲထွက်ခွင့်အတွက် မြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်‌နေတာကို ဆိုးလ်ရှားကအလိုရှိနေပါတယ်။ ဂိုးသမား နေရာမှာတော့ လာမယ့် လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ …